Ny zavatra azontsika ianarana avy any Etazonia. Video Mampiaraka USA
Inona ny ANTSIKA ho afaka raha ny marina-ny Amerikana tsara kokoa noho isika. Eto dia Ambony ny zavatra tsy fantatrareo, mety indrindra aza. Ny hatsaram-panahy sy ny fahaiza-ny dia fitsapana ny tao ny fiara nampianatra. Misy ihany koa ny tsy misy ny ‘zo laharam-pahamehana’, fa ny ‘zo avy amin’i’. Raha misy olona maka ny hafa ny razambe, dia nandao ny Amerikana. Eto izany dia mangina lalana — io no mora eto dia ny kolontsain’ny lalana. Ny tandroka dia tena zara raha ampiasaina. Hiala sy ho any an-tobin-handeha any. Ny Amerikana loatra ny mandany fotoana sy ny manahirana. Ny maro amin’ny paompy sy mitohy. Nahoana ny ezaka rehetra.
Tatatra sakanana dia teny vahiny eto. Ao amin’ny tatatra misy shredder — afaka fotsiny hanipy voa lovia famafazana eo amin’ny fanovozan-drano, tsy izany no Olana. Any ETAZONIA izy ireo tahaka ny entana ny sakafo. Rehefa miandrandra ny maitso mavana ny Ampahany betsaka, satria afaka mandry yeah, ohatra, na mihinana fotsiny taty aoriana. Raha hanafatra ny rano, tsy mandoa na inona na inona. Any ETAZONIA, ho tsara feo na inona na inona ny trano Fisakafoanana.
Rano foana maimaim-poana
Fijanonana dia maimaim-poana, rehefa tonga any amin’ny car Park ny store aelin’ny. Tsara lahatra, ny vola dia tokony ho any amin’ny Fivarotana ny mandany, ary tsy amin’ny Fieritreretana ratsy ny tolona, ny fomba ela ianao dia nijanona teo, ary tsy maintsy mandoa vola. Fandaniam-poana ny fisarahana dia ny mba. Fa tsy raha, mandritra izany fotoana izany, ny efitra fisarahana zava-maniry dia hatreto mandroso fa ny olombelona dia lafin-javatra tsy ilaina intsony. Amerika no tena maoderina, ny fisarahana rafitra. Izany mamonjy ny olona manavaka ny fako mihitsy, ary ny ankamaroany ratsy fako fitoeran-javatra ny toerana ny tranony sy ny trano. Ny teknolojia dia mahatonga izany ny fanajana, ny Amerikana efa tafapetraka amin’ny ho avy. Ny vahoaka Amerikana no tsy Fax fitaovana sy ny bebe kokoa.
Izany no vakoka avy izy
Izany dia satria ny Amerikana zatra haingana be ny teknolojia vaovao. Ny fidiovana lady in the USA noho ny hafa na aiza na aiza — raha toa ianao mandeha amin’ny maha-mpanjifa ao an-trano fivoahana, izany dia, mazava ho azy, maimaim-poana. Fa tsy maintsy mandoa vola amin’ny maha-mpanjifa ao an-trano fidiovana, nefa tsy American efa nandre ny. Ny Alemaina — Dakozia mania: Na ao an-trano, alemana hanorina naorina-ao an-dakozia. Izany dia noho ny Amerikana tena tsy takatry ny saina — ahoana no ahafahako mametraka iray ao amin’ny trano izay tsy isan ny, an-dakozia. Na izany na tsy American trano, ny lakozia dia naorina-ao amin’ny ny an’ireo tompon — raha tsy izany ianao dia manakarama ao amin’ity firenena ity, tsy nisy na iray aza
← Tranonkala online chat